कथाः छोरीको अपहरण « Sansar News
सीतादेवी छेत्री, कांग्लातोङबी मणिपुर
४ मंसिर २०७८, शनिबार ०७:१६
सानैबाट तीनैजना पढ्नमा मेघावी थिए । आमाबाबुले छोराछोरीलाई राम्रो संस्कार दिएर हुर्काएका थिए । आफ्नो नानीहरूको राम्रो पढाई, राम्रो संस्कार देख्दा आमाबाबुलाई अरू के चाहियो र ? आफ्नो सन्तानसित सन्तुष्ट थिए दुवै ।
दुई दाई टी.डी.सी. पुगेका थिए । बहिनी रुपा एघारमा दाखिला गरेर हायर सेकेन्डरी जाँदै थिइन् ।
जस्तो नाम उस्तै रुप ईश्वरले पनि दिएका । आमाबाबुले जानेरै नाम राखिदिएका रहेछन् । रुपमा त्यस क्षेत्र र क्याम्पसमा रुपा जतिकी अरू कोहि सुन्दरी थिएनन । बाटोमा हिँड्दा बालक, वृद्ध, जवान महिलासम्म एकचोटि फर्केर हेर्ने गर्दथे उनको सुन्दरतालाई । पाँच फिट चार इन्च जतिकी अग्ली, लामा लामा केश, आँखा मृग जस्ता, गोरो वर्ण हेर्दा अतिनै सुन्दरी ।
गाउँको ठाउँ, दसवीँ पास हुने बित्तिकैबाट कन्यअर्थ आउनेका ताँती थिए घरमा । रुपालाई भने राम्रो पढेर कुनै एउटा जागीर गर्ने विचार थियो । छोरीको इच्छालाई हेर्दै बाबाले कन्यअर्थ आउनेलाई विनम्र हुँदै छोरीको आकाङ्क्षा सुनाउने गर्थे । धनको केहि कमी थिएन र पढेसम्म पढाउने विचार थियो पदमबहादुरको ।
रुपा बाह्रमा पढ्दै थिइन् । एकदिन सेकेन्डरीबाट घर फर्किदै थिइन्, बाटोमा तीन केटाहरू मिली पछाडिबाट केहि सुँघाएर बेहोस पारे । दुईजनाले छिटो–छिटो बोकेर गाडीमा हाले । अर्काले गाडी चलाएर लगे । एउटा नौ दस वर्षको केटो स्कूलबाट आउँदै गर्दा परैबाट रुपालाई बोकेर गाडीमा हालेको देख्यो । छेउमा जाने आँट गरेन र डरायो ।
त्यहाँबाट दुगुर्दै गएर जमुनालाई सबै घटना सुनायो । जमुनाले फोन गरेर रूँदै त्यो केटोले भनेको सबै कुराहरू सुनाइन्, पदमबहादुरलाई । पसल छिटो बन्द गरेर केहि सहयोगीलाई लिएर हस्याङफस्याङ गर्दै घर पुगे । गाउँमा धेरै जातिका मान्छे थिए । र उनीहरू सीधै मुखियाका घर गएर भएको घटनाको जानकारी गराए । मुखियाले यसबारे उनलाई केहि जानकारी नभएको जनाए ।
रुपाको भाग्य राम्रो थियो होला सायद, गाउँमा सबै भेला भएर खोजी गर्दै थिए । अचानक फौजीहरू त्यता पेट्रोलिङ हिँड्दै आए । सबै भेला भएको देख्दा उनीहरूले सोधपुछ गर्दा कारण पत्तो लगाए ।
फौजी सीधै मुखियाको घर गएर माइकबाट गाउँका सबैलाई यहाँ अहिले हाँजिर गराउन अर्डर गरे । छिटो भन्दा छिटो हाँजिर हुनु भन्ने निर्देश भयो ।
आधा घण्टासम्ममा गाउँका युवक, वृद्ध, महिलाहरू सबै जम्मा भएका थिए । रुपालाई अपहरण गरेको गाउँका सबैलाई थाहा हुन्छ । सबैले एकछिन आ–आफ्नो भाषामा कुरा गरे ।
उनीहरूलाई यता–उता फोन लगाएर टुङ्गो लगाए, गाउँकै केटोले अपहरण गरेको रहेछ भन्ने बुझे ।
यता त्यो अपहरण गरेको केटाले उसको विवाहित बहिनीको घर लगेर गएछ सीधै । बहिनीको आँगनमा गाडी रोकेर तीनजनाले मिलेर रुपालाई बोकेर भित्र लगे । बहिनी तीन छक्क पर्दै सोधिछिन् -‘यो केटी त मेरो स्कूलको सहपाठी रुपा हो । यसलाई के भयो र यसरी बेहोस हालतमा यहाँ लिएर आयौ ।’
‘बहिनी पहिला मलाई माफ गरि सुन ल, यो रुपालाई म आन्तरिक हृदयबाट माया गर्छु । कति चोटी प्रेम प्रस्ताव राखीसकेँ, जहिल्यै इन्कार मात्र गर्छिन । म उ बेगर बस्नु नसक्ने भएर आज अपहरण गरेर यहाँ लिएर आएको । आज मलाई तिम्रो सहयोग चाहिएको छ ।’
‘तिमी मेरो बहिनी भएर यस्तो भन्छेउ ? कति मुश्किलले आज यहाँसम्म ल्याउनु सफल भएको छु। मेरो माया तिमीले के बुझ्थेउ ?’
स्कूलमा पनि यस्तो कहिलेकाहीँ हुने गथ्र्यो रुपालाई । यसलाई छारेरोग यानी मिर्गीको बिमारी छ भन्थे स्कूलमा । यस्तो हुँदा शिक्षकहरूले छिटै अस्पताल पुर्याएर घरमा खबर दिने गर्थे । ल अब छिटो अस्पताल पुर्याउनुपर्छ, छिटो गाडीमा चढाउ ।
अस्पताल पुर्याई सक्दा रुपाका बुवा, गाउँका थुप्रै मान्छे र मुखियाज्यू त्यहि पुगे ।
दुई घण्टाजतिमा रुपालाई होश आयो । छक्क पर्दै ओरपर हेर्दै थिइन् । अहिलेसम्म उसित के–के भयो बेखबर थिएन । बुवाले छेउमा आएर सोधे ‘नानी तिमीलाई अहिले कस्तो छ ?’
‘काकालाई केहि भएको त छैन नी बुवा ?’
‘केहि भएको छैन भेटघाट गरौँ भनेर हो । तँ केहि चिन्ता नगर ।’ भन्दै सोचे – ‘यसलाई ती केटाले बेहोश गरेको केहि याददाश छैन सायद… केटाहरूले अपहरण गर्नुभन्दा पहिलै यसलाई बिमारीले छोपिसकेको रहेछ होला र केहि सम्झना छैन । नत्र भए केहि त भन्थी ।’
पदमबहादुरले निकै बेर सोचे । छोरीसित केहि अनर्थ हुनुबाट भगवानले बचाए । मुखियाज्यू हजुरले यसरी ग्यारेन्टी लिन्छु भन्दा हामी पुलिस केश नगर्ने भइयो । तर आइन्दा फेरि यस्तो घटना नहोस् । राम्रोसित मिलाई दिनुहोस् ।
‘यो त सानो कुरा होइन दाजु । त्यो केटाको यत्रो साहस भएछ गाउँका चेलीबेटी अपहरण गर्ने ? त्यसलाई पुलिस केश गरी जेलमा हाल्नुपर्छ। भोलि म पनि हजुरसितै जान्छु र त्यसको धुलाई गर्छु ।’
‘मैले अगिनै पुलिसमा एफ.आई.आर. गर्छु भनेको थिए । मुखियाबाले यो गाउँका मामला हो म नै मिलाउँछु भन्दै थिए । आमाको रोएर हालत बिग्रेको छ भन्दै थिए गाउँकाले ।’
‘म त एक–दुई दिन यहाँ छोरीलाई राख्छु सोचेर आएको थिए, तर तिम्रो कुरा सुन्दा सही लाग्यो । हामीले के बिराएका छौँ र ? मुखियाबाले सकेनन् भने त्यो केटाहरूलाई जेल पुर्याउनुपर्छ ।’
रुपा, पल्लो कोठामा बसेर सुनिरहेकी थिइन् छक्क पर्दै । त्यो केटा माथि कति रिस उठ्दै थियो । अहिले गएर ठूलो लौरोले हान्न मन लाग्दै थियो ।
भोलिपल्ट बिहानै भाइ–बुहारी सहित गाउँ पुगे । उनीहरू आएको खबर सुनेर मुखियाज्यू भेट्न पदमबहादुरको घर पुगे ।
गाउँमै केश मिलाउ, प्रहरी नबोलाऔं भन्ने सल्लाह दिए मुखियाले । त्यहाँको नियममा गाउँका मुखियाले सभामा दिएको आदेश सबैले पालन गरेको हुनैपर्ने नियम थियो । यहाँसम्म कि मुखियाको आदेश पालन नगर्नेलाई गाउँबाट निकाल्ने नियम थियो ।
त्यसले सबैको अगाडि माफी माग्दै भन्यो–‘मैले गरेको काम माफी गर्ने योग्य छैन तर आज यो सभाको अगाडि भन्छु, आजबाट रुपालाई म मेरो बैनीको नजरले हर्नेछु । र उसको हिफाजत गर्छु । के बुद्धि आयो मलाई यस्तो काम गरेँ । रुपालाई मैले छोएको पनि छुइन यसको साक्षी यो मेरो दुई साथी र बहिनी छन् । हुनसक्छ भने यो पापीलाई माफी गरिदिनुहोस् ।’ भन्दै विन्ती चढायो ।
लामो बहसपछि सबैले एकपल्टको लागि माफ गर्ने निर्णय गरे। आइन्दा यसले गाउँमा कुनै प्रकारको घटना गरे, परिवार सहित गाउबाट निकासित गर्ने लेखापढी गरी सभा विसर्जन गरे ।